Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif oo loo diiday inay ka dhoofaan Garoonka Muqdisho | Banaadir Times
HomeUncategorisedXasan Sheekh iyo Sheekh Shariif oo loo diiday inay ka dhoofaan Garoonka...
War goor dhow soo baxay ayaa sheegaya in xiisad ka taagan tahay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, kaddib markii Maamulka Garoonka uu amar ku soo rogay in aanay ka dhoofi karin wafdi ay hoggaaminayaan Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif oo maanta ku sii jeeda Beledweyne.
Wararka ayaa sheegaya in la xanibay diyaaraddii ay wafdiga raaci lahaayeen, kaddib amar dowladda ka soo baxay.
Xildhibaan C/risaaq Cumar Maxamed oo aan khadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegay in wafdiga Madaxweynayaashii hore oo xilligan ku sugan qeybta VIP-da garoonka loo diidan yahay safarkooda Beledweyne, isla markaana ay tahay arrin la siyaasadeynayo.
Waxaa uu sheegay in sababaha loogu hor-istaagay ay tahay safarka Ra’iisul Wasaare Kheyre ee Beledweyne, si aanay Madasha Xisbiyada Qaran uga hormarin Beledweyne.
“Labada Madaxweyne safarkooda gurmadka Beledweyne ee maanta waa loo diidan yahay inay garoonka ka dhoofaan, maamulka Garoonka, waxay leeyihiin ma bixi kartaan amar ayaa heysanaa, markaa weydiinay waxay na dhaheen Madaxweyne Waare iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa bixi raba oo beledweyne aadaya”ayuu yiri Xildhibaan C/risaaq Cumar.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa dhowaan ku dhawaaqay inay ugu deeqeen gurmadka fatahaada Wabiga lacag gaareysa $200,000 oo dollar, isla markaana magacaabay Guddiga Gurmadka fatahaada Beledweyne.
Previous articleXildhibaanada Baarlamaanka Puntland oo xilka ka qaaday Guddoomiyihii Baarlamaanka
Next articleDood dheer kadib diyaaraddii Xasan iyo Shariif oo loo fasaxay Beledweyne